Ederede Mehul Rajput na Martech Zone |
Edemede site na Mehul Rajput
Mehul Rajput bụ onye isi nke Mindinventory, ụlọ ọrụ na-enye ọrụ mmepe ngwa mkpanaka na iOS na nyiwe gam akporo maka ndị ahịa ụwa. Ọ hụrụ n'anya ide ihe na teknụzụ mkpanaka, mmepe ngwa, mmalite, ịzụ ahịa na ngwa ngwa mkpanaka. Ọ bụ onye na - enye onyinye oge niile maka entrepreneur, HuffingtonPost, Business.com, TechCocktail, SiteProNews, Inc42, Business2Community na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ndụmọdụ iji meziwanye ngwa ekwentị gị n'oge ezumike
Tọzdee, Disemba 6, 2016 Mehul Rajput
Marketingre ahịa ngwa abụrụla isi ihe dị mkpa na ịwepụta ngwa ngwa oge niile site na ngwa ndị gara nke ọma. Mgbasa ozi ahịa dị mma nwere ike ọ bụghị naanị ime ka ngwaahịa ahụ na-adọrọ adọrọ kamakwa weta ya na mmasị nke ọtụtụ ndị mmadụ. Ma oge ụfọdụ, nke ahụ bụ ngwa chọrọ. Enwere otutu ngwa dị mma nke na-enwetaghị ihe ruru ọtụtụ ihe ha kwesiri n'ihi na mgbasa ozi ahịa ha enweghị isi ma ọ bụ na-ezighi ezi iji nweta ngwa ahụ. Na
Olee otú Iji Mepụta Azụmaahịa Ntuziaka Iji jirichaa Nkuchi Ngwa Mobile Gị?
Tuesday, October 25, 2016 Mehul Rajput
Na-ele anya ịhapụ ịhapụ ngwa kachasị egwu oge niile n'ụwa? Ọ dị mma, anyị kwenyere na gị, mana buru ụzọ leba anya na ndụmọdụ ndị a gbasara otu ị ga - esi dobe ya ka ọ nwee ọganiihu. Ngwa dị jụụ abụghị naanị ihe na - eme ka ị nwee ihe ịga nke ọma, kamakwa usoro ahịa dị mma yana nyocha dị mma. Nọgide na-agụ iji chọpụta otu ị ga - esi nwee Candy Crush nke ọgbọ a: Bata